Aakar June 07, 2008
सबैलाई सोध्यो- राजनिति भनेको के हो ? जवाफ दिन्छन्- एउटा घिनलाग्दो खेल हो, कोही भन्छन् कुर्सी को रेस हो । तर अहिले लाग्छ यो नै सत्य हो । गणतन्त्र घोषणा भएको हप्ता दिन भन्दा बढि भैसकेको छ, तर अझसम्म पनि राष्ट्रपति को निर्णय गर्न सकेका छैनन्, या भनौँ चाहेका छैनन् । अन्यथा एउटा राष्ट्रिय व्यक्तित्व को लागि यति धेरै समय लाग्छ ?
देशमा जब प्रजातन्त्र आएको थियो, तब नेताहरु कुर्लेका थिए, अब हामी धेरै अगाडि जानेछौँ । लोकतन्त्र आयो, त्यही कुरा दोहोय्राए, अनि गणतन्त्र घोषणा नहुन्जेल सम्म पनि के-के नै गरौँला भन्दै नेताहरु कुर्लेका थिए । तर यहाँ "हात्ति आयो-हात्ति आयो, फुस्सा" भनेझैँ भा'को छ या भनौँ "जुनै जोगी आएपनि कानै चिरेका" भन्ने अवस्था आएको छ । यसो किन गरेको भनेर सोध्यो भने सबै दलहरुले अरु पार्टिहरु तिर औँला सोझ्याइदिन्छन् । माओवादीलाई सोध्यो, कांग्रेसलाई दोष दिन्छ, अनि कांग्रेसलाई सोध्यो माओवादीलाई दोष दिन्छ । तर मलाई लाग्छ , यो जनताको दोष हो कि, जनता ले सँधै विश्वास गरेर यस्ता भातमारा नेताहरुलाई चुनेर माथि पठाउँछन् । चुनाव अगाडि यसरी नेताहरु बोल्छन् कि, लाग्छ हाम्रो देश अहिले नै युरोपियन देशहरुको दाँजोमा पुग्छ । तर यो सबै हाम्रो आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हो । सरकार माओवादीले बनाउने भइसकेको अवस्थामा पनि एउटा राष्ट्रपति को बारेमा छिनोफानो गर्न सकेका छैनन् दलहरुले । यसलाई हामीले के भन्ने ? देश मा गणतन्त्रको आभाष कहिले पाईन्छ ?
मैले थाहा पाइसकें यहाँ, सबैलाई देशको प्रथम राष्ट्रपति हुनुपरेको छ । यस्तै अवस्था भैरहेन हो भने, अचम्म मान्नु पर्दैन, नेपाल मा यो भन्दा पनि ठूलो तन्त्र आउँछ, "मनपरीतन्त्र" ।
दिलीप आचार्य June 7, 2008 at 6:06 PM
"यो जनताको दोष हो कि, जनता ले सँधै विश्वास गरेर यस्ता भातमारा नेताहरुलाई चुनेर माथि पठाउँछन् ..." यो बाक्य चाहि भित्तै पुग्ने गरी दिनुभयो हो!
अब बल्ल बल्ल ४-५ बर्षमा एकचोटि चुनाव आँउछ, अझ यसपाला त झण्डै १० बर्ष भयो होला । अनी जनतालाई भोट हाल्न पनि रहर लागी सकेको हुन्छ भोट नहाली पनि नहुने हालौ भने पनि सबै तपाईले भने ज्स्तै भातमारा ।
अनी के हुनु अरु । तर यौटा कुरा के भने जनताले भातारालाई भोट दिएका होईनन् तर भोट पाउने जत्ती चाँहि सबै भातमारा बनेका हुन।
ametya June 7, 2008 at 6:10 PM
Belated Happy Republic Day..........
Basanta Gautam June 8, 2008 at 4:03 AM
यसैगरी किचकिच गरेर मूल कुरालाई बिर्सिरहे भने यिनको पनि त्यति राम्रो गर्ने छैनन् जनताले।
राष्ट्रपतिको पद नागरिक समाजको हकको कुरो हो। यो सर्वोच्च र सम्मानित पदमा राजनीतिक पक्ष-विपक्ष भन्दा माथि उठ्न सक्ने मान्छे चाहिन्छ।
D-Express June 8, 2008 at 6:45 AM
I agree with Basanta Ji, first president should be from Civil Society. Then there is no point in fighting for that post. UML Maoist and NC not getting that and independent person getting it will be very good and best I think!!!
sameer June 8, 2008 at 1:08 PM
यहाँ "हात्ति आयो-हात्ति आयो, फुस्सा" भनेझैँ भा'को छ या भनौँ "जुनै जोगी आएपनि कानै चिरेका" भन्ने अवस्था आएको छ।
badri June 8, 2008 at 3:03 PM
हेर्दाखेरी कुनै नेताहरु ले केही गर्लान जस्तो छैन नेपालमा !!
sameer November 12, 2010 at 4:51 AM